पाठेघरको मुखमा मासु पलाउने समस्या- महिलाले थाहा पाउनैपर्ने कुरा – Online Bichar
पाठेघरको मुखमा मासु पलाउने समस्या- महिलाले थाहा पाउनैपर्ने कुरा
Online Bichar 23rd January, 2019, Wednesday 2:50 PM
९ माघ । धेरै महिलामा पाठेघरको मुखमा मासु पलाउने समस्या देखिने गरेको छ । पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या कस्तो हो ? पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ? पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै शल्यक्रिया आवश्यक छ वा छैन ? के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? यिनै विषयमा विना न्यौपानेले स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नुतन शर्मासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रायः त यसको लागि अप्रेशन नै गर्नुपर्छ, तर अहिले अरु उपचार पद्धतिको पनि विकास भैसकेको छ । बिरामीको अवस्था र आवश्यकता हेरी उपचार हुन्छ । उसको उमेरले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ, त्यसमा । जस्तै २५, ३० वर्षकी महिलाको सानो २, ३ सेन्टिमिटरको फाईब्रोईड छ, जसलाई बाँझोपनको कारण बनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अप्रेशन गर्दैनौं । ईन्जेक्सन दिएर त्यसलाई सुकाउने अनि बच्चाको योजनामा जाने हो । यदि यही समस्या ४०र५० वर्षको महिलामा देखियो, यसमा धेरैखालको समस्या छ भने मात्रै अप्रेशन गर्नुपर्छ ।
हामीले कम उमेर भएका, सन्तानको रहर नपुगेका, औषधी गरेर निको हुने अवस्थाका महिलाको पाठेघर सकेसम्म फाल्दैनौं । कति महिलाहरु आफैं पनि पाठेघर झिकिदिनुस ढुक्क हुन्छ भन्छन् । तर, उनीहरुलाई औषधीले निको हुने अवस्था भएसम्म पाठेघर झिक्नु हुन्न भनेर सम्झाउने काम डाक्टरको हो । हिजोआज धेरै निजी अस्पतालमा पाठेघरसम्बन्धी समस्या हुनासाथ झिक्नुपर्छ भन्ने गलत अभ्यास भएको छ । झिक्नैपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा पाठेघर झिक्नु हुन्न । फालिसकेपछि त्यसले अझ धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
झिक्नैपर्ने अवस्थाबाहेक शरीरको कुनै पनि अंग झिक्नु राम्रो होइन । पाठेघरको कुरा पनि त्यही हो । एक त सानै उमेरमा पाठेघर फाल्दा बच्चा नभएकालाई बच्चा हुँदैन, अब भन्नुहोस्, ३४÷३५ वर्षको महिलाको पाठेघर फाल्नु राम्रो हो त ? बाध्यताबाहेक उसको त पुरै बाँकी जिन्दगी बाँच्नु छ, समस्या हुन्छ नि ।
फालेपछि पनि बिभिन्न समस्या हुन्छ । हातखुट्टा गल्ने, धेरै काम गर्न नसक्ने समस्या पनि देखिन्छन् ।
यदि सानो ट्युमर सानो छ, बढेके छैन उमेर ४०÷४५ वर्षको छ भने त्यसले खासै असर गर्दैन । किनभने यो ट्युमर जहिलेसम्म महिनावारी हुन्छ, त्यही समयसम्म बढ्दै जाने हो जब महिनावारी सुक्दै जान्छ त्यो पनि घट्दै जान्छ । अर्काे कुरा फाईब्रोईडमा क्यान्सर हुँदैन । त्यसैले डरलाग्दो ट्युमर होइन यो ।